Xeer-ilaaliyaha Guud oo sheegay inay Gudbiyeen Warbixin Jawaab u ahayd Dalabkii Dalka Kenya - iftineducation.com
Xeer-ilaaliyaha Guud oo sheegay inay Gudbiyeen Warbixin Jawaab u ahayd Dalabkii Dalka Kenya
iftineducation.com – Xeer-ilaaliyaha guud ee Qaranka Axmed Cali Daahir oo ku sugan dalka Holland ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay mar kale u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda Dukumiintiyo ay uga jawaabayso dalab ay horay Maxkamadda Cadaaladda ugu gudbisay Kenya, kaas oo ku Saabsanaa in muranka badda ee labada waddan u dhexeeya lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda.
Dr Axmed Cali ayaa intaas ku daray in mar kale ay warqad ka dhan ah Kenya u gudbiyeen maxkamadda, wuxuuna xusay in dowladda Somalia ay ka go’an tahay in muranka badda ee ka dhexeeya Soomaaliya & Kenya lagu dhameeyo hab sharci ah oo aysan ogolaanayn wax wadahadal ah.
“Aninga, safiirka Somalia iyo Qareennadeenna; Waxaanu joognaa maxkamadda caalamiga ah, Waxaanan u nimid inaan gudbinno jawaab ku saabsan Warbixintii ay kal-hore keentay Kenya Maxkamadda, Runtii 05-ta bishan Feberaayo ayay ku ekeyd, Alle Mahadii waqtigii naloo qabtay ayaan ku keennay, Jawaab ku filan tan Kenya ay maxkamadda keentay ayaan maanta u gudbinay,” ayuu Dr. Axmed Cali Daahir yiri.
Xeer-ilaaliyaha Qaranka oo sii hadlayay ayaa intaas ku daray. “Runtii sanadkii hore Anagu waxaan si rasmi ah u gudbinay dacwad buuxda, balse Kenya ayaa soo gud-bisatay Warqad ay ku hor-is-taageyso in dacwaddan la qaado, Annaguna mar kale ayaan jawaab ka dhan ah arrintaasi keenay maxkamadda.”
Ugu dambeyn, Dr. Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in rajo aad u wanaagsan ay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ka qabaan inay ku guuleystaan kiiska la xiriira muranka badda ee ka dhexeeya Somalia iyo Kenya.
DEG DEG: Al-Shabaab oo la wareegay magaalada Marka, kadib markii ay ka baxeen AMISOM